Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း၏ကြိုးစားမှုဖြင့် Jin Oki Flamenco ဂစ်တာဖျော်ဖြေပွဲ
ကြိုးစားနှင့်အတူ Jin Oki Flamenco ဂစ်တာဖျော်ဖြေပွဲ
ကြိုးစားနှင့်အတူ Jin Oki Flamenco ဂစ်တာဖျော်ဖြေပွဲ - စိတ်ကိုတုန်လှုပ်စေသောစပိန်သုတေသနပြုချက်။ ~
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဦး ဆောင် Flamenco ဂစ်တာသမား Jin Oki
အဆိုပါခြေသည်း - အကွာအဝေးအားလုံးကျော် Andalusian လေခေါ်ဆိုသည်။
တစ်ညလုံးကမ္ဘာကျော်အကော်ဒီယန်ကြိုးစားသူများ၏ guest ည့်သည်နှင့်ပျော်ရွှင်မှု။ !!
* ဤစွမ်းဆောင်ရည်သည်ရှေ့၊ ကျော၊ ဘယ်၊ ညာတို့တွင်ထိုင်ခုံတစ်လုံးအတွက်မဖွင့်သော်လည်းအရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာချက်အရ၎င်းကိုစွမ်းဆောင်ရည်၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
အလန် Fes ဖျော်ဖြေပွဲကနေ Adagio
Jin Oki (မီးပန်းဂစ်တာ)
Shinichiro ဆူဒို (စန္ဒရား)
Jose Colon (Flamenco ဒေသန္တရ / ဗုံသံ)
အထူး guest ည့်သည်: ကြိုးစား (အကော်ဒီယန်)
Jin Oki (မီးပန်းဂစ်တာသမား)
Nagano စီရင်စု၊ Karuizawa မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။သူသည်ဂျပန်နှင့်စပိန်တို့အကြားအပြန်အလှန်သွားနေစဉ်အသက်နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် Flamenco ကိုစုပ်ယူသည်။ Japan Flamenco Association မှကမကထပြုသည့် ၁၉၉၇ လူသစ်ဖျော်ဖြေပွဲမှချီးမြှင့်သောဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ NHK Taiga ဒရာမာ "Furin Kazan" ၏အဓိကသီချင်းကိုတာဝန်ခံသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်သူသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့သော "20th Murcia" Niño Ricardo "Flamenco Guitar International Competition" ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာနခွဲကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး၎င်းပုံစံကို TBS "Jonetsu Tairiku" တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ထို့နောက်သူသည် EXILE သို့သီချင်းတစ်ပုဒ်ပေးခဲ့ပြီး Fuji TV ၏ "Yortamori" တွင်ပုံမှန်ဖောက်သည်အဖြစ်ပေါ်လာသည်။ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်သူသည်သံစုံတီးဝိုင်း၊ ဘဲလေး၊ Noh, Nagauta နှင့်စာဖတ်ခြင်းနှင့်တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခြင်းစသည့်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။၎င်းသည်ပုံစီးစကိတ်စီးခြင်းအတွက်အလွန်ရင်းနှီးမှုရှိပြီး Anime "Yuri !!! on ICE" တွင်တီးခတ်ခဲ့ပြီးမူလဂီတကိုကစားသမားများစွာ၏အစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။Coo-starring အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Seranito, Manuel Agheta, Kazumi Watanabe, coba, Shin-ichi Fukuda, Taro Hakase, Kotaro Oshio, NAOTO, Dai Kimura, Kunihiko Liang၊ ခေါင်းစဉ်များချန်လှပ်) ။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသူသည် Flamenco Guitar ensemble ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရင်းသူသည်ဂီတကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေစဉ်ထူးခြားသော flamenco ဂစ်တာကိုဆက်လက်ရှာဖွေသည်။
ကြိုးစားမှု (အကော်ဒီယန် / တေးရေးဆရာ)
အသက် ၁၈ နှစ်တွင်အီတလီသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။မြောက်မြားစွာသောနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။သူသည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးမှ CD ဖြန့်ချိမှုများ၊ အနှစ် ၃၀ ကျော်ဥရောပခရီးစဉ်နှင့်အိုက်စလန် Diva Bjork မှကမ္ဘာလှည့်ခရီးစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ထို့အပြင်သူတေးရေးဆရာအဖြစ်သူအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောရုပ်ရှင်, ဇာတ်စင်နှင့်တီဗီစီးပွားဖြစ်ဂီတအကျင့်ကိုကျင့် 18 ထက်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးအလွန်အမင်းအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အီတလီနိုင်ငံ၊ ကက်စတယ်ဖီဒိုဒါတွင်ဂုဏ်ထူးဆောင်နိုင်ငံသားဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ၂၀၂၀ တွင်တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော“ အကော်ဒီယန်” ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။သူသည်ပထမဆုံးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုတစ်နိုင်ငံလုံးရှိစီရင်စု ၄၇ ခုတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းအယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူမူရင်းဂီတကိုအကော်ဒီယန်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်ဖြစ်သော "Accordion Plus +" ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်း ၄၄ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည်။
အထွေထွေ Incorporated အသင်း Flamenco အသင်း